ကုမ္ပဏီသတင်းများ - Shenzhen WMD Circuits, Ltd
မှတ်ယူ, လူတိုင်း circuit ကိုပျဉ်ပြားနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပါတယ်. ယနေ့ခေတ်, ဆားကစ်ဘုတ်ကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့အဓိကဆက်သွယ်ရေးအီလက်ထရွန်းနစ်အဖြစ် High-end စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ, နှင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ. ထိုကွောငျ့, အားလုံးအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူများကိုရွေးမည်.
အဘယ်ကြောင့် pcb ဘုတ်အဖွဲ့ဖိုင် Gerber ဒေတာကူးပြောင်းပြီးတော့ဘုတ်အဖွဲ့ကိုကိုင်တွယ်ရပါမည်?
အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်, နေသမျှကာလပတ်လုံးကဖိုင်အပြောင်းအလဲနဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ကပါဝင်ပတ်သက်အဖြစ်, အများဆုံးအင်ဂျင်နီယာများ PCB ဘုတ်အဖွဲ့ဖိုင်တွေဒီဇိုင်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့စက်ရုံသို့တိုက်ရိုက်ပို့ပေးဖို့နေသားတကျရှိပါသည်.
A ကောင်းဆုံး PCB ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူ --- WMD Circuits
circuit board ထုတ်လုပ်မှုအများအပြားအကြီးစားအီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်သော core ကိုအလုပ်များကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်၏ပြီးစီးအဓိကဝယ်လိုအားထုတ်လုပ်သူများအများဆုံးမျှော်လင့်အခြေအနေ.
အောင် WMD Circuits PCB ပျဉ်ပြားတို့အတွက်လိုအပ်ဘယ်အချက်အလက်?
Shenzhen WMD Circuits, Ltd. တစ်ဦး pcb ဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်. အဓိကထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများမှတဆင့်-အပေါက်ကို double-တဖက်သတ် pcb circuit ကိုပျဉ်ပြားပါဝင်သည်, High-အလွှာပေါင်းစုံအလွှာတိကျစွာဆားကစ်ဘုတ်, မျက်စိကန်းသောသင်ျဂွိုဟျ-ပေါက်ပျဉ်ပြား, High-အကြိမ်ရေပျဉ်ပြား, ထူသောကြေးနီသတ္တုပါးပျဉ်ပြား, နှင့် hybrids တွေကို.
စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2002 ရှန်ကျန်းအတွက်, လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းအမြင့်ဆုံးတိကျစွာ PCBs အမျိုးမျိုးတို့ကိုတစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍကစားထားပြီး. ကျနော်တို့ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်အသေးစား-to-အလတ်စားအသံအတိုးအကျယ်အလုပ်အကိုင်များအာရုံစိုက်. သုတေသနအတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူ ....